2 Samuel 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel Nhoma a Ɛto So Abien 1:1-27
Dawid tee sɛ Saul awu (1-16)
Dawid twaa Saul ne Yonatan ho awerɛhow dwom (17-27)
1 Saul wu akyi a Dawid kodii Amalekfo so nkonim* bae no, Dawid san bɛtenaa Siklag+ nnanu. 2 Ne nnansa so no, ɔbarima bi fi Saul asraafo no mu bae, na ɔreba no, na wasuan n’ataade mu de dɔte agu ne tirim. Bere a oduu Dawid nkyɛn no, ɔbɔɔ ne mu ase de n’anim butuw fam. 3 Dawid bisaa no sɛ: “Ɛhe na wufi reba yi?” Na obuae sɛ: “Israel asraafo mu na mifi a maguan aba ha yi.” 4 Dawid bisaa no sɛ: “Nneɛma kɔɔ so dɛn? Mesrɛ wo, ka kyerɛ me.” Na ɔkae sɛ: “Asraafo no aguan afi akono, na wɔn mu pii awuwu; Saul ne ne ba Yonatan nso awu.”+ 5 Ɛnna Dawid bisaa aberante a ɔbɛkaa asɛm no sɛ: “Ɛyɛɛ dɛn na wuhui sɛ Saul ne ne ba Yonatan awu?” 6 Ɛnna aberante no kae sɛ: “Mikopuee Gilboa Bepɔw so,+ na mihui sɛ Saul tweri ne peaw. Ná asraafo a wɔka nteaseɛnam ne wɔn a wɔtete apɔnkɔ so no ato no awie.+ 7 Bere a otwaa n’ani a ohuu me no, ɔfrɛɛ me, na migyee so sɛ, ‘Mini!’ 8 Ɛnna obisaa me sɛ, ‘Wufi he?’ Na mekae sɛ, ‘Meyɛ Amalekni.’+ 9 Afei ɔkae sɛ, ‘Mesrɛ wo, bɛn me na kum me, na merehu amane paa nanso minwui.’* 10 Enti mebɛn no kum no,+ efisɛ sɛnea na wapira da hɔ no, mihui sɛ ɔrennya nkwa. Afei mituu n’ahemmotiri na miyii ne nkapo sɛ mede rebrɛ me wura.” 11 Ɛnna Dawid soo n’ataade mu suan mu, na mmarima a wɔka ne ho no nyinaa nso yɛɛ saa. 12 Esiane sɛ na Saul ne ne ba Yonatan ne Yehowa man ne Israel fi awuwu+ wɔ sekan ano nti, wosu bɔɔ bena, na wɔyɛɛ akɔnkyen*+ kosii anwummere. 13 Dawid bisaa aberante a ɔbɛkaa asɛm no sɛ: “Wufi he?” Na obuae sɛ: “Amalekni bi a wabɛsoɛ ɔman yi mu ba ne me.” 14 Ɛnna Dawid bisaa no sɛ: “Adɛn nti na woansuro sɛ wode wo nsa bɛka nea Yehowa asra no?”+ 15 Afei Dawid frɛɛ mmerante no mu baako ka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ no so kokum no.” Enti ɔkɔɔ no so kokum no.+ 16 Dawid ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo mogya begu wo ara wo ti so efisɛ w’ankasa w’ano na adi adanse atia wo sɛ, ‘Me na mikum nea Yehowa asra no no.’”+ 17 Afei Dawid twaa Saul ne ne ba Yonatan ho awerɛhow dwom,*+ 18 na ɔkae sɛ awerɛhow dwom yi a wɔakyerɛw wɔ Yasar nhoma mu+ a wɔato din “Agyan” no, wɔnkyerɛ Yudafo no: 19 “O Israel, w’ahoɔfɛfo na awuwu wɔ wo mmepɔw so yi.+ Hwɛ sɛnea akatakyi ahwehwe ase! 20 Monnka ho asɛm wɔ Gat;+Mommmɔ no dawuru wɔ Askelon mmɔnten so,Anyɛ saa a Filistifo mma mmea ani begye,Na momonotofo* mma mmea bedi ahurusi. 21 Gilboa mmepɔw,+Mma obosu anaa osu nntɔ nngu mo so,Na mma nneɛma mmfifi mo nsaase so mma wɔmmfa nnyi ntoboa kronkron,+Efisɛ ɛhɔ na akatakyi kyɛm ho guu fĩ;Saul kyɛm no, afei de,ɛrenyɛ nea wɔde ngo asra ho bio. 22 Yonatan agyan anni huammɔ,+Na Saul sekan nso antow amfom,+Ehwiee akofo mogya gui, na edii akatakyi nam. 23 Bere a Saul ne Yonatan+ te ase no, na nkurɔfo dɔ wɔn na wɔpɛ wɔn asɛm,*Owu mu nso, wɔn mu antetew.+ Ná wɔn ho yɛ hare sen akɔre+Na wɔn ho yɛ den sen agyata.+ 24 O Israel mma mmea, munsu Saul;Ɔno na ɔde ntama kɔkɔɔ furaa mo na ɔde afɛfɛde nyinaa bi hyɛɛ mo;Ɔno na ɔde sika kɔkɔɔ agude guu mo ntaade so. 25 Hwɛ sɛnea akatakyi ahwehwe ase wɔ ɔko mu! Hwɛ sɛnea Yonatan atɔ fam wɔ wo bepɔw so!+ 26 O me nua Yonatan, wo nti, me ho hiahia me;Ná woda me koma so.+ Ɔdɔ a na wodɔ me no yɛ nwonwa; ɛsen mmea dɔ koraa.+ 27 Hwɛ sɛnea akatakyi ahwehwe aseNa akode asɛe!”
^ Anaa “kokunkum Amalekfo.”
^ Anaa “me kra da so wɔ me mu.”
^ Anaa “kwadwom.”
^ Anaa “wɔn a wontwaa wɔn dua.”
^ Anaa “na wɔn ho yɛ ahomeka.”